ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA : Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila
Hentitra ny fanaraha-maso amin’ny fidirana mpianatra ho zandary, polisy na miaramila. Samy nanamafy ireo tompon’andraikitra isany avy fa tsy azo ekena ny fisian’ny hosoka amin’ny fifaninanana izay hatao. 20 janvier 2020
Ho an’ny teo anivon’ny Tafika Malagasy dia nahatsikaritra trangana tsy fanarahan-dalàna ny teo anivon’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika.
Antontan-taratasy hosoka hidirana ho miaramila matihanina miisa 89 no fantatra fa tra-tehaka. Avy hatrany dia nandray fepetra ny teo anivon’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy sy ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena tamin’ireo miaramila izay tafiditra tsy ara-dalàna ho miaramila am-perinasa. Tsy maintsy natsahatra amin’ny asany avy hatrany izy ireo. “Nisy 89 tafiditra hanao miaramila matihanina nefa nanao hosoka teo amin’ny antotan-taratasy fampidirana azy. Izy ireo dia tsy maintsy navoaka hiala tao amin’ny Tafika satria tsy ara-dalàna”, hoy ny fanazavana noentin’ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy, Ny jeneraly Rakotonirina Théophile.
Nambarany fa efa mandeha ny fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity. Tsy maintsy fantarina sy karohina izay olona nandray sy nampanan-kery an’ireo antontan-taratasy tsy ara-dalàna ireo ka nahatafiditra ny tompon’izany ao anatin’ny fianakaviamben’ny Tafika Malagasy. Efa mandeha amin’izao fotoana izao ny fampiantsoana an’ireo tompon’antoka ahiahiana.
“Efa mandeha ny fanadihadiana, misy ny olona efa voaantso eo anivon’ny zandarimaria Antananarivo mikasika izany. Mandeha tsikelikely ny fiantsoana satria misy maromaro no tafiditra amin’ity raharaha ity”, hoy hatrany ny fanazavany. Hatramin’izay dia anisany nalaza ratsy tamin’ny fanaovana hosoka sy kolikoly ny fifaninanana hidirana ho mpitandro filaminana. Nanomboka tamin’ity taona ity dia nanova famindra sy nanitsy izay lesoka rehetra tsy nety tany aloha ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny polisy ary Tafika Malagasy. Tsy mahita rirany intsony izay zatra ny lalan-dririnina mikasa hanao kolikoly, ny fahaizan’ny mpifaninana ihany no ahatafiditra azy na tsia.